Ahụmahụ Semalt na-ekpuchi Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Super Web
ParseHub bụ otu n'ime ngwá ọrụ weebụ kachasị mma ma ama. Site na ihe ntanetị weebụ a dị elu na nke kachasị ọhụrụ, ịnwere ike iwepụ data ma dị mkpa ka ị pịa ebe nrụọrụ weebụ chọrọ ma ọ bụ blog iji nweta ya n'ụzọ zuru ezu ma ọ bụ nke a kpọpụtara. Ọ dị mma ịkọ na ParseHub bụ ihe omimi ma dị mfe iji usoro nyocha data - ldp traffic video analytics. Enwere otutu nkuzi iji mee ka anyị malite n'isi ihe omume a. Anyị nwere ike ịgafe na arụmọrụ weebụ kachasị elu na-enweghị nsogbu ọ bụla. Ọ dịkwa mfe ịmalite na atụmatụ n'efu na ịkwaga na ọkọlọtọ ma ọ bụ nsụgharị ọkachamara dịka gị chọrọ. Nke kachasị mma bụ na nkwado ndị ahịa nke ngwá ọrụ a dị ịrịba ama na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọchụnta ego akwadoro ya.
Wepụ data ọ bụla na weebụ
Anyị maara na World Wide Web nwere ibu nke ozi na data na onye ọ bụla chọrọ ịnweta na nkwụsị ole na ole . Anyị na-eche nsogbu ihu mgbe anyị na-ede ihe, na-echekwa ma na-ezigara ndị ntanetị weebụ. Site na ParseHub, ị nwere ike ịhụ ọdịnihu ebe onye ọ bụla nwere ike ịjụ ajụjụ banyere otu esi ahazi ma ọ bụ mepụta data ụwa n'enweghị ihe ọ bụla. ParseHub ejirila usoro nkwado na-adị mfe nghọta ma bụrụ usoro ihe nchịkọta data nke dị nro ma dị nro..Ọzọkwa, ọ na-agbanwe, dị ike ma dị mfe iji. Site na iwepụ ma ọ bụ ihichapụ nsogbu ndị dị mkpa ma ọ bụ nsogbu nke ịnakọta data, ị nwere ike iwepụtakwu oge na nghọta ndị bara uru, ihe ngosi nke mara mma, na nzukọ data kama ịnweta nchịkọta weebụ. I nwekwara ike ime mkpebi ndị dị mkpa nke azụmahịa na usoro a n'ụzọ dị mfe.
Uru nke ParseHub
ParseHub maka ndị mmepe:
Maka ndị nwere nkà na ụzụ dị ka ndị na-emepụta weebụ, ndị mmepe, na onye mmemme, ParseHub na-enye ntụziaka zuru oke banyere igbanwe, mezie ma họrọ ụdị dị iche iche ka ha ghara ' Enwere m ide akwụkwọ mgbagwoju anya weebụ ugboro ugboro. Ị nwere ike iji usoro a ma jikwaa esemokwu gị niile, ebe nrụọrụ weebụ na-edozi, ndenye akwụkwọ, akwụkwọ mpịakọta na-enweghị ngwụcha na ụdị ntanetị.
Ikwesịrị ịkọwa ma pịa na ibe weebụ ịchọrọ iwepụ data ma mee ka ParseHub mee ndị fọdụrụ. Usoro ihe omume a ga-ejiri ihe ọmụma na data dị otú ahụ mara na ịntanetị ma hazie ma hazie gị maka gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji aka gị mee ihe ederede, ParseHub ga-ahapụ gị ịnweta CSS onye ịhọrọ ka ị nwee ike idezi àgwà ndị ahụ n'emeghị nsogbu ọ bụla. Nweta data site na narị otu narị na ọtụtụ puku peeji nke mfe. Nbanye na URL URL na okwu ọbụla, na ParseHub ga-arụ ọrụ ya na-akpaghị aka.